China European dhizaini yebhokisi shanduri Kugadzira uye Fekitori | Fuda
Zvigadzirwa zvaro zvine mavara anotevera: serialization, modularization, akawanda mabasa, akazara nzvimbo, diki vhoriyamu, kurema uremu uye kutaridzika kwakanaka, vanosangana nezvinodiwa fo IEC1330 standard uye inoshanda kuguta kuruzhinji rwekuparadzira, mumugwagwa mwenje magetsi magetsi. Zvakare nekushandiswa kwesimba mumaindasitiri & emabhizimusi emabhizinesi, akakwira-kumusoro, nzvimbo dzekugara, minda yemafuta, jetty uye kuvaka saiti.
Chigadzirwa chine HV yekuparadzira unit, shanduri uye Lv yekuparadzira unit uye yakakamurwa muHV kamuri, shanduko kamuri uye LV, iyo LV kamuri ine mabasa akazara, iyo neHXGN-10 mhete main unit inoumba iyo yekutanga gadziriro system, pamwe yakarongedzwa kuita akati wandei. nzira dzekupa (ring main supply, terminal inopa uye mbiri-sosi yekupa) uye zvakare inogona kupihwa neHV metering zvinhu zvinosangana nezvinodiwa paHV metering modhi S9, S11 uye imwe yakaderera kurasikirwa nemafuta-yakanyudzwa maTransformers kana akaoma maTransformer anogona kusarudzwa. Iyo transformer kamuri yakagadzirirwa kuve ne otomatiki yekumanikidza mweya kutonhora system uye magetsi system. Iyo LV kamuri inogona kuumba mushandisi-inodiwa magetsi magetsi zvirongwa mune yepaneru mhando kana cabinet mhando mhando. Ipa mashandiro akati wandei (kugovera magetsi, kugovera mwenje, muripo wemagetsi inoshanda, uye metering yesimba remagetsi) kusangana nezvinodiwa zvakasiyana nevashandisi. Uye gonesa manejimendi manejimendi uye nekuvandudza mhando yemagetsi.
Iyo HV kamuri inoenderana mune dhizaini iyo inopa ne-mis-oparesheni yekudzivirira inopindirana basa, Kamuri yega yega ine otomatiki uye yekumanikidza mwenje mudziyo. Uye zvakare, zvese zvinhu zviri muHV neLV kamuri zvakavimbika mukuita uye zviri nyore mukushanda, izvo zvinoita kuti zvigadzirwa zvive zvakachengeteka uye zvakavimbika mukumhanya uye nyore mukushanda nekugadzirisa.
Iyo inotora zvese zvakasarudzika kufefetedza uye yekumanikidza kufefetera kusvika kune yakanaka kufefetedza uye kutonhora mhedzisiro, iyo transformer kamuri uye LV kamuri inopa nemhepo mweya, iyo inopeperesa fan ine tembiricha controller kuti otomatiki atange nekumira maererano neyakagadzirirwa preset. Saka kuve nechokwadi pane-mutoro kumhanya kweshanduko.
Iyo casing mukomana inodzivirira mvura yemvura uye zvekune dzimwe nyika kubva pamusuwo uye inogadzirwa neinopisa yakagadziriswa simbi simbi jira kana anti-ngura aluminium alloy sheet uye inoiswa kune anti-ngura. Mvura uye guruva-chiratidzo pasi pemamiriro ekunze uye inowedzera hupenyu hwebasa re transformer.
Pashure: SH15 dzakateerana amorphous chiwanikwa zvakazara akanyudzwa transformer
Zvadaro: Chimiro cheAmerican chebhokisi chinoshandura